SomaliTalk.com » AIDS
Home » Qoraallada Halkudhegga "AIDS"
Hayadda SCAC iyo Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada oo si Wadajir ah u Xusey Maalinta AIDS-ka Adduunka 2014
Halkii maalin oo kasta waxaa cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS uu ku dhacaa 7,000 qof oo ku nool dunida dacaladeeda, taas oo ka dhigeysa in halkii saac oo kasta uu qiyaastii cudurkaasi asiibo 300 qof. AKHRI Sida ay sheegtay Hay’adda WHO iyo UNAIDS, 35.3 million ayaa qabay cududrka dilaaga ah ee AIDS/HIV sannadkii 2012, dadka sannadkaas u geeriyoodey cudurkaas waa 1.6 million oo qof. “Soomaalida Qabta...
Hayadda SCAC iyo Agaasinka Caafimaadka Wasaaradda Adeega oo si Wadajir ah u Xustey Maalinta AIDS-ka Adduunka 2013
Halkii maalin oo kasta waxaa cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS uu ku dhacaa 7,000 qof oo ku nool dunida dacaladeeda, taas oo ka dhigeysa in halkii saac oo kasta uu qiyaastii cudurkaasi asiibo 300 qof. AKHRI Sida ay sheegtay Hay’adda WHO iyo UNAIDS, 35.3 million ayaa qabay cududrka dilaaga ah ee AIDS/HIV sannadkii 2012, dadka sannadkaas u geeriyoodey cudurkaas waa 1.6 million oo qof. “Soomaalida...
Cudurka Dilaaga ah ee AIDS oo Fara ba’an ku haya caalamka, waxaana sannadkii 2011 u dhintay 1,700,000 qof
Halkii maalin oo kasta waxaa cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS uu ku dhacaa 7,000 qof oo ku nool dunida dacaladeeda, taas oo ka dhigeysa in halkii saac oo kasta uu qiyaastii cudurkaasi asiibo 300 qof. AKHRI “…dadka qaba AIDSee Sannadkii Tagey 2011 Caalamka waa 34 Milyan. Dadka uu ku dhacay ee qaadey waa 2 Milyan iyo Bar. Dadka u Dhintey waa 1 Milyan iyo Todobo Boqol oo kun qof …. “Soomaalida...
“Soomaalida Qabta Cudurka HIV/AIDS oo Gaarey 35,175 qof” UN: “Haddii arrintu sida ay tahay ku sii socota waxaa dadka Soomaaliyeed ee cudurkaas qaba waxaa lagu qiyaasay in ay gaari doonaan 55,000 qof sannadka 2012…” SII AKHRI… Kulan ay ka qaybgaleen Qaybaha Bulshada sida Culama’udiin, Dhalinyaro, Haween Raga wada Gawaarida, dadka ku jira Xeryaha Barakacayaasha ,kuwa Cuna Qaadka ,Macalimiin...
Guddiga South Central Aids Commission (SCAC) oo ka Warbixisey wax Qabadkeedii Sannadkii 2011 iyo Caqabadihii ka Hor yimid
“Soomaalida Qabta Cudurka HIV/AIDS oo Gaarey 35,175 qof” UN: “Haddii arrintu sida ay tahay ku sii socota waxaa dadka Soomaaliyeed ee cudurkaas qaba waxaa lagu qiyaasay in ay gaari doonaan 55,000 qof sannadka 2012…” SII AKHRI… Warbixinta: Guddiga South Central Aids Commission (SCAC) Waxaa Bishaan 20-keeda ilaa 21-da lagu qabtey Hotel Ambasadoor ee Magaalada Muqdiosho Kulan lagu soo bandhigayey...
Halkudheg: AIDS, HIV/AIDS
Hayadda Human Care oo Tababar ku saabsan Habka ugu Casrisan ee loo Baaro HIV/AIDS U Qabatey Shay-Baariistayaal
“Soomaalida Qabta Cudurka HIV/AIDS oo Gaarey 35,175 qof” UN: “Haddii arrintu sida ay tahay ku sii socota waxaa dadka Soomaaliyeed ee cudurkaas qaba waxaa lagu qiyaasay in ay gaari doonaan 55,000 qof sannadka 2012…” SII AKHRI… Hayadda Human Care oo ah Hayad ka shaqeysa Gudaha Dalka iyadoo kaashaneysa Shirkadda SD (Standard Diagnostics INC ) oo ah Shirkada ka ganacsata qaybaha kala...
Hooyo Sacdiya : Waa Hooyo la Nool Cudurka HIV/AIDS waxay Haysataa Lix Caruur ah oo Agoon waxay u baahan tahaya in loo gargaaro.
“Soomaalida Qabta Cudurka HIV/AIDS oo Gaarey 35,175 qof” UN: “Haddii arrintu sida ay tahay ku sii socota waxaa dadka Soomaaliyeed ee cudurkaas qaba waxaa lagu qiyaasay in ay gaari doonaan 55,000 qof sannadka 2012…” SII AKHRI… Tan iyo markii ay dhaceen dagaalada Sokeeye dadka Soomaaliyeed waxaa isugu darsamay Sadex waxyaabood oo Alla laga Magan galo oo kala ah Colaad, Abaar iyo Cuduro...
1-da Desember Maalinta AIDS-ka Adduunka oo laga Xusey Magaalada Muqdisho
“Soomaalida Qabta Cudurka HIV/AIDS oo Gaarey 35,175 qof” UN: “Haddii arrintu sida ay tahay ku sii socota waxaa dadka Soomaaliyeed ee cudurkaas qaba waxaa lagu qiyaasay in ay gaari doonaan 55,000 qof sannadka 2012…” SII AKHRI… Hay’adaha SCAC iyo COGWO oo si Wadajir ah u Xusay Maalinta AIDS-ka Adduunka. 1-da December waa maalin u asteysan maalinta AIDS-ka adduunka, waxaana maalinkaas...
Dallada Haweenka (KWDON) oo Sameysay Wacyi gelin ku sabsan HIV/AIDS.
Dallada Haweenka (KWDON) oo sameysay Wacyi gelin ku sabsan HIV/AIDs Waxayna ka sameysay Schoolka Imamu-Nawaawi ee Magaalada Qardho Schoolkaas oo Wax lu baro Haweenka Aan waxna Qorin waxna Akhrin. Guddomiyaha Dalada Haweenka G/karkaar Ubax Saciid Daahir ayaa Fahfahisay khatarta u leyahay Cudurka HIV/AIDS waxa ay sheegtay in cudurkaan u aafeyay adduunka lona bahan yahay in laga digtonaado, waxaay...
Dallada SOYDEN oo tababar ku saabsan ka hortaga Cudurka AIDS-ka u furtey dhalinyaro Soomaaliyeed.
Sannadkii 2008 tirada Soomaalida qabta AIDS-ka waxaa lag qiyaasay 24,000 qof, waxaana xilligaas cudurkaas u dhintay 1,600 qof, waxaana ku agoomoobay 8,800 carruur ah… Cudurka dilaaga ah ee AIDS waxaa qaba 22.4 million oo qof oo ku nool dalalka Afrika ee Saharaha ka hooseeya. Sannadkii 2008 waxaa lagu qiyaasay in 1.4 million oo ku nool dalalka Saxaraha ka hooseeya, waxaana xilligaas cudurkaas...
Muqdisho: Siminaar ku saabsan sidii looga hortegi lahaa cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka
Cudurka dilaaga ah ee AIDS waxaa qaba 22.4 million oo qof oo ku nool dalalka Afrika ee Saharaha ka hooseeya. Sannadkii 2008 waxaa lagu qiyaasay in 1.4 million oo ku nool dalalka Saxaraha ka hooseeya, waxaana xilligaas cudurkaas dilaaga ahi ku dhacay 1.9 million oo ku dhaqan Sub-Sahara Afrika. Qiyaastii 14 million oo carruur ah ayaa waalidkood uu galaaftay cudurkaasi. Warbixintaas waxaa lagu sheegay...
Maalinta Cudurka Halista ah ee AIDS-ka iyo Muqdisho
Magaalada Muqdisho oo laga xusay Maalinta AIDS-ka Adduunka Muqdisho oo ka baxdey Aamusnaantii Cudurka AIDS-ka Halkan ka daawo sawirro dheeraad ah Munaasabad lagu xusayay Maalinta AIDS-ka Adduunka oo maanta ku beegan oo ay soo agaasimeen 11-urur oo ka mid ah kuwa la dagaalama faafidda cudurka HIV/AIDS ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho. Hotelka Shamo oo lagu qabtay xafladdan ayaa lagu xardhay...